Warshad Shiinaha Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaal. Donghua
Qalabka calaamadaha ee ka socda DHUA wuxuu daboolayaa boodhadhka, buugaagta dhibcaha, calaamadaha dukaanka tafaariiqda iyo bandhigyada xayeysiiska saldhigga taraafikada. Wax soo saarka guud waxaa ka mid ah calaamadaha aan korantada lahayn, boorarka dhijitaalka ah, shaashadaha fiidiyowga iyo calaamadaha neon. Dhua badiyaa waxay bixisaa qalab akrilik ah oo laga heli karo istaandarka, iyo xaashiyo go'an-ilaa-xajmi ah iyo been abuur khaas ah oo loogu talagalay codsiga calaamadaha.
Calaamadaha acrylic-ka waa xaashi balaastik ah oo dhalaalaya dhalaalaya. Waxay ku timaaddaa midabbo badan oo kala duwan oo ay ku jiraan baraf cad oo saafi ah. Nooca calaamaddani waa mid fudud oo waara oo loogu talagalay dibedda iyo isticmaalka gudaha. Sidoo kale waa mid aad u jilicsan oo ku habboon qaab kasta. Waxaa jira adeegsiyo badan oo kala duwan taas oo ka dhigaysa tan calaamad caan ah.